२०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार १०:१०:००
बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्ने जघन्य अपराधका अभियुक्त अफ्ताब आलमलाई राखिएको नख्खु कारागारभित्र कैदीबन्दीले नै ठगी धन्दा चलाउने र बाहिर घुम्नसमेत निस्किने गरेको खुलेको छ । नख्खु सुधारगृह कार्यालय स्रोतका अनुसार चौकीदार सन्तोष गुरुङ र नाइकेहरू टासी गुरुङ, भीम बस्नेत, शक्ति प्रजा, सोम तामाङ, आइते तामाङ र प्रकाश कार्कीले पछिल्लो पाँच महिनामा कारागारभित्र र बाहिर गरी ७४ लाखभन्दा धेरै ठगी गरेका हुन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली भन्छन्–नख्खुका चौकीदार र नाइकेबारे गुनासा आएका छन्
नख्खु कारागारका चौकीदार र नाइकेबारे गुनासा आएका छन् । चौकीदार सन्तोष गुरुङको सन्दर्भमा हामीले नख्खु नै गएर बुझ्यौँ । तर, भरपर्दो प्रमाण नभेटिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन । ठगीका सम्बन्धमा भरपर्दो प्रमण भेटिए कारबाही हुन्छ, ढुक्क हुनुस् ।
चौकीदार पनि कैदीबन्दी नै हुन् । कारागारभित्र कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्ति बाहिर निस्किन मिल्दैन । कामले निस्किनै परे पनि सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानी हुन्छ । तर, नख्खु कारागारका चौकीदार सन्तोष गुरुङ कारागारबाट सजिलै निस्किएर डेटिङसमेत गएको तस्बिर नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त भएको छ । तर, उनको हर्कतबारे सुरक्षाकर्मी र जेलर अनभिज्ञता जनाउँछन् ।
नख्खु सुधारगृह कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेल भने गर्लफ्रेन्डसँग गुरुङले खिचेको फोटोमा पनि षड्यन्त्र भएको दाबी गर्छन् । ‘कस्तो फोटो हो ? कहाँको फोटो हो ? त्यसबारे मलाई थाहा भएन । यदि हो भने पनि त्यसमा षड्यन्त्र छ । समीरमानसिंह बस्नेत चिन्नुहुन्छ नि ? यसमा पक्कै उनीहरूकै हात हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
नख्खु कारागारका ३९३ जना कैदीमा मानसिक रोग
नख्खु कारागारभित्रै मानसिक अस्पताल
नख्खु कारागारमा कैदीबीच झगडा हुँदा एकको मृत्यु